Q&A for Donation for Myanmar Flood – Aung Kyaw Moe – Medium
Q&A for Donation for Myanmar Flood
Question: Who is behind this page?
Answer: This page is designed and hosted by 2C2P in collaboration with KBZ Bank for Visa/MasterCard transactions and AGD Bank for MPU transactions. The transactions are processed securely by 2C2P and settled by KBZ Bank and AGD Bank respectively.
2C2P is founded byaBurmese founder and it has offices across Southeast Asia, Hong Kong and USA. 2C2P process transactions for over 20 banks across Southeast Asia. More about 2C2P can be found here: https://en.wikipedia.org/wiki/2C2P
KBZ Bank is largest and most respected bank in Myanmar.
AGD Bank is one of the reputable banks in Myanmar.
Question: Do I have to pay transaction fees? Do receiving foundations have to pay transaction fees?
2C2P and KBZ Bank will not charge any transaction fees. The donated amount in both USD and MMK will arrive to the foundation without any deduction.
Question: Can you tell me more about the foundations I am donating to?
Answers: Certainly. We are getting the data from the foundations. The descriptions will be available on “About Foundations” page.
Answer: The funds donated will be received by the foundations weekly. They will use the funds as needed for the flood victims.
Question: How can I be sure that the funds donated by me reaches to the foundations?
Answer: We send your donation daily to the foundations. The activities are recorded on https://www.facebook.com/myanmarnds?ref=bookmarks.
Question: Will I see how much has been donated by whom?
Answer: Here is the Donor List. Your email address and phone numbers will not be disclosed. If you want to be anonymous, simply enter “Anonymous Donor” or any other name you wish at the name text box.
Question: How the donated money will reach to the affected areas?
Answer: We specialise in payment processing and settlement and our primary focus is to collect the money securely and efficiently. We will let the foundations decide where they want to use and how they want to use it for flood. We’ve carefully selected which foundation to work with to ensure that your donation reaches to the people in need.
Question: How soon the donated money will reach to the affected areas?
Answer: The funds are settled daily through credit card networks such as Visa and MasterCard. The funds will reach to settlement bank (KBZ Bank in this case) in less than 24 hours. The funds will be disburse to the foundation on the next day. If the donated amount is small, the funds will be accumulated and disburse to the foundations weekly.
Question: Can my organization receive donation through your site?
Answer: We are happy to accommodate if you are representingareputable organization. Please contact us at myanmar@2c2p.com.
Question: How secure is the Donation For Myanmar Flood site?
Answer: The page is hosted by 2C2P on secured server with HTTPS and the transaction is processed by 2C2P. 2C2P complies with PCIDSS Level 1 security. PCIDSS stands for Payment Card Industry Data Security Standard and Level 1 is the highest data security level achieved byapayment processor. You can search 2C2P at: http://www.visa.com/splisting/
Q&A for Donation for Myanmar Flood (မြန်မာဘာသာ)
အမေး။ ။ ဒီဝက်ဆိုဒ်နောက်ကွယ်က ဘယ်သူတွေလဲ
အဖြေ။ ။ ဒီဝက်ဆိုဒ်ကို 2C2P မှအခမဲ့လုပ်ဆောင်ပေးထားပြီး၊ Visa/MasterCard မှ လှူငွေများကို ကမ္ဘောဇဘဏ်(KBZ)နှင့်ပူးပေါင်းထားသလို၊ MPU ကတ်မှ လှူငွေများကို အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(AGD) နှင့်လည်းလက်တွဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ 2C2P ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကတည်ထောင်ထားပြီး အရှေ့တောင် အာရှ၊ဟောင်ကောင်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေမှာ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဘဏ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်။
အကျယ်တဝင့်သိလိုပါက https://en.wikipedia.org/wiki/2C2P နဲ့ http://www.2c2p.com/index.aspxမှာ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ http://www.kbzbank.com/
အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(AGD) ကတော့ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးဘဏ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ http://www.agdbank.com/
အမေး။ ။ လှူဒါန်းသူတွေအနေနဲ့ ၀န်ဆောင်ခပေးရသလား၊ အလှူငွေလက်ခံတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရော ၀န်ဆောင်ခ ကျသင့်ပါသလား။
အဖြေ။ ။ 2C2P နဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်တို့က ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။ ဗီဇာနဲ့ မာစတာကတ်တို့ကတော့ ဝန်ဆောင်ခကို လောလောဆယ်မှာ အလှုလက်ခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကောက်ခံနေပါသေးတယ်။ MPU (Myanmar Payment Union) အနေနဲ့တော့ ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကနေ လက်ခံရရှိတဲ့ အလှုငွေအားလုံးကို ဝန်ဆောင်ခ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုထားပါတယ်။ 2C2P က ဗီဇာနဲ့ မာစတာကတ် အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခများကို ဖြေလျော့ပေးဖို့ တောင်းခံထားပေမယ့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် အချိန်လိုဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ဗီဇာနဲ့ မာစတာကတ်တို့ မှ ကောက်ခံတဲ့ ဝန်ဆောင်ခများကို 2C2P က စိုက်ထုတ်လှုဒါန်းပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလှုငွေလက်ခံရရှိသူများ အနေဖြင့် အလှုငွေများကို အပြည့်အဝ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေး။ ။ အလှူငွေလက်ခံတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြလို့ရမလား။
အဖြေ။ ။ ပြောပြရမှာပေါ့။ အချက်အလက်တွေရသလောက်တင်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ(About Foundation) ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အမေး။ ။လှူဒါန်းငွေတွေကို ဘယ်လိုသုံမှာလဲ
အဖြေ။ ။ရရှိတဲ့အလှူငွေတွေကို ပရဟိတအဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်ရရှိနေမှာပါ။ အဆိုပါအဖွဲ့တွေကပဲ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို လိုအပ်သလိုပေကမ်းဝေမျှပေ:မှာပါ။
အမေး။ ။ကျနော်လှူတဲ့ငွေကို ပရဟိတအဖွဲ့တွေဆီကိုရောက်တယ်လို့ ဘယ်လိုစိတ်ချရမလဲ။
အဖြေ။ ။ရရှိတဲ့အလှူငွေတွေကို နေ့စဉ်လွဲပြောင်းပေးနေပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်မှုများကို ဒီမှာ(https://www.facebook.com/myanmarnds?ref=bookmarks) ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အမေး။ ။ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်လှုဒါန်း ထားတယ်ဆိုတာ သိရမလား။
အဖြေ။ ။အခု လှုဒါန်းသူ စာရင်း ဒီမှာ ရပါပြီ။ အီးမေးလ် လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့ လုံခြုံရေးအရ ဖေါ်ပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမည်မဖေါ်ပဲ လှုဒါန်းလိုရင်တော့ နာမည်နေရာမှာ Anonymous ဒါမှမဟုတ် အခြားနာမည်တစ်ခုခုသာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
မေးခွန်း။ ။လှုဒါန်းလိုက်တဲ့ ငွေတွေ ရေဘေးခံစားနေရတဲ့ နေရာတွေကို ဘယ်လို ရောက်မှာလဲ။
အဖြေ။ ။ကျနော်တို့က ငွေပေးချေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူ သက်သက်ပါ။ ဖောင်ဒေးရှင်းများက လှုဒါန်းငွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့က လက်ခံမယ့် ဖောင်ဒေးရှင်းများကို သေချာစိစစ် ရွေးချယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် လှုဒါန်းငွေများကို လိုအပ်သူတွေထံ ရောက်သွားနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်။
မေးခွန်း။ ။လှုဒါန်းလိုက်တဲ့ငွေတွေ ရေဘေးခံစားနေရသူတွေဆီ ဘယ်လောက်မြန်မြန် ရောက်မှာလဲ ။
အဖြေ။ ။လှုဒါန်းငွေတွေဟာ ဗီဇာနဲ့ မာစတာကတ် ကွန်ယက်ထဲကနေ နေ့စဉ် စာရင်းရှင်လင်းပြီး ကမ္ဘောဇ ဘဏ်ထဲကို ၂၄နာရီ အတွင်းရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းဆီကိုနေ့ချင်း ဒါမှမဟုတ် နောက်တစ်နေ့မှာ ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း။ ။ကျနော်တို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလှုငွေ လက်ခံပေးနိုင်မလား။
အဖြေ။ ။လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဆီmyanmar@2c2p.com ကဆင့် အီးမေးလ် ပို့လုိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ ဝမ်းသာစွာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အသင့် ပါ။
မေးခွန်း။ ။Donation For Myanmar Flood ၀က်ဆိုဒ် က ဘယ်လောက် လုံခြုံမှု ရှိသလဲ။
အဖြေ။ ။၀က်ဆိုဒ် က 2C2P ရဲ့ ဆာဗာများပေါ် မှာ ရှိနေပြီး 2C2P က ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ 2C2P က ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ အတွက်နိုင်ငံတကာမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Payment Card Industry Data Security Standard(PCIDSS) ရဲ့ Level 1 လုံခြုံမှု အသိအမှတ် ပြုခံထားရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://www.visa.com/splisting/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Clapping shows how much you appreciated Aung Kyaw Moe’s story.
Never missastory from Aung Kyaw Moe, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Aung Kyaw Moe